တင်ဒါအသိပေးချက် - နီဂေးဘူတာအဆောက်အအုံကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ရှုခင်းများ၊ နီဂdeထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနချုပ်အဆောက်အအုံနှင့်ခေါင်မိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်နီဂdeဘူတာရုံအဆောက်အအုံပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနံပါတ် ၇ အစီအစဉ် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆောက်အဦးခေါင်မိုးဘူတာအမှတ်7စီမံကိန်းများကိုလေလံပြန်လည်မွမ်းမံ၏ဘူတာရုံအဆောက်အဦး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး Nigde စည်းမျဉ်းဥပဒေ, Nigde Nigde ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဆောက်အအုံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုပတျဝနျးကငျြ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆောက်အဦးခေါင်မိုးဘူတာအမှတ်7စီမံကိန်းများကိုလေလံပြန်လည်မွမ်းမံ၏ဘူတာရုံအဆောက်အဦး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး Nigde စည်းမျဉ်းဥပဒေ, Nigde Nigde ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဆောက်အအုံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုပတျဝနျးကငျြ
14 / 09 / 2012 လေလံပွဲ, လောက, အထွေထွေ, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, တည်ဆောက်နေလေလံ
TCDD2။ ဒေသန္တရရုံး
2012 / 122332
1 - ထိုအုပ်ချုပ်ရေး
Yenimahalle / တူရကီ၏ Marsandiz ခရိုင်
3123090515 - 3122111571
ဂ) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ (မရရှိနိုင်လျှင်):
2 - ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏နူးညံ့သောသဘာဝတရား၏ subject:
စာချုပ်လက်မှတ်ထိုး၏နေ့စွဲကနေ5ကာလ၌
90 (ကိုးဆယ်) ရက်
3- နူးညံ့ / များ၏ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်:
24.09.2012 - 10: 00
4 - အရည်အချင်းများအကဲဖြတ်စံလျှောက်ထားရန်တင်ဒါများနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ:
4.1.1.3 ။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့စပ်လျဉ်းယူရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းမှဘာသာရပ်အလုပ်အမှုကိုပြုရသင့်သည်,
4.1.3 ။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေပိုင်ဆိုင်မှုစစ်တမ်း, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖုံးအုပ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ်ယဉ်ကျေးမှု, Restitution စီမံကိန်း, လမ်းတိုးတက်မှု, Landscaping စီမံကိန်းများနှင့်အကဲဖြတ်, သိုလှောင်ရေး, ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်လုပ်နှင့်ဆက်စပ်ကုန်စည်များတူးဖော်တွေ့ရှိခြင်းနှင့်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသူတို့၏ Applications ကိုသတ္တမအပိုဒ် (က) ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ 8 အပိုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်းသူတို့ရဲ့တို့ဝယ်ယူ , (ခ), (ဂ), (ဃ), (င), (ဆ) နှင့် (ဈ) အရေးအသားအခြေအနေအပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားရှိမရှိမှလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ။
4.1.4 ။ နောက်ဆက်တွဲနှင့်အညီကမ်းလှမ်းမှုကို၏စံပုံစံအက္ခရာ။
4.1.5 ။ အာမခံချက်သို့မဟုတ်ယာယီစိတ်ပိုင်းဖြတ်လေလံများအတွက်အာမခံချက်၏အက္ခရာ၏ယာယီအက္ခရာများထက်အခြားအာမခံ၏ပုံစံနှငျ့အကြောင်းအရာ Specification TCDD2။ ဒေသတွင်းက၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးရေးရာပေါ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ။
4.1.6 ။ proxy နုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်၏ပုံစံနှင့်ကိုယ်စား, နု notarized လက်မှတ်ကြေငြာအတွက်ပါဝင်မှုများအတွက်ရှေ့နေတစ်ဦး notarized တန်ခိုးနှင့်ရှေ့နေ,
4.1.7 ။ အမှုအတွက်လေလံစိတ်ပိုင်းဖြတ်beyannamesi.işသည့်မိတ်ဖက် Specification မိတ်ဖက်များ၏ပုံစံနဲ့ content အတွက်ဖက်စပ်ဖြစ်၏ လေယာဉ်မှူးကမိတ်ဖက်, အနည်းဆုံး% 100 အလုပ်ဖော်ပြချက်, ပုဂ္ဂလိကမိတ်ဖက်, (အငယ်တန်းမိတ်ဖက်) နှင့်ဆင်တူသည်သင့်လျော်ခြင်းနှင့်လေလံစျေးနှုန်းနှုန်းအနည်းဆုံး% 40 အဆိုပြုချက်ကို၏နောက်ဆက်တွဲအတွက်သင့်လျော်သောနှင့်လေလံစျေးနှုန်းနှင့်အလားတူအလုပ်ဖော်ပြချက်၏အလုပ်အတွေ့အကြုံလက်မှတ်နှုန်းပေးရမညျ။
4.1.8 ။ တရားဝင်လူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသရုပ်ပြတင်ဆက်စာရွက်စာတမ်း, entity ပိုပြီးပြုလုပ်၏တစ်ဝက်တစ်ရှယ်ယာနှင့်အတူမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်ဗိသုကာပညာရှင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ပိုင်ဆိုင်နှင့်အမှု၌အတွင်းခန်းထဲမှာ / ကုန်သွယ်၏ 50-% 50% ပူးတွဲဥပဒေရေးရာ entity, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအခန်းများဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့ထက် စီးပွားဖြစ်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုအများပြည်သူစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်အများပြည်သူစာရင်းကိုင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပထမဦးဆုံးကြေငြာချက်၏နေ့စွဲပြီးနောက်ကြေညာချက်နေ့စွဲရှေ့၌နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးခွငျးအားဖွငျ့ကျင်းပကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအများပြည်သူစာရွက်စာတမ်း။
4.1.9 ။ ဥပဒေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါကြေငြာသူတစ်ဦးဖက်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖက်စပ်တစ်ခုချင်းစီမိတ်ဖက်များက 4.1 ။ အပိုဒ်၏ပုဒ်မခွဲများတွင်ပါရှိသောစာရွက်စာတမ်းများသီးခြားစီတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေလူတစ်ဦး, သူတို့ကဒီပူးတွဲ (51) တွင်မိတ်ဖက် 4.1.8% အစုရှယ်ယာပိုင်လျှင် / ကအနည်းဆုံးတွင်ပိုမိုထက်ဝက်ကျော်ရှယ်ယာအတှေ့အကွုံကိုပြသတင်ဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity document ရဲ့တစ်ဦးကဖက်စပ်မိတ်ဖက်
4.1.10 ။ အမှုအတွက်လေလံတိကျတဲ့အတွက်မိတ်ဖက်များ၏ကြေငြာ၏ဖက်စပ်, ပုံစံနှင့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်
4.1.11 ။ အားလုံးပါသို့မဟုတ်နူးညံ့သောများ၏ဘာသာရပ်တစ်ခုအဘို့ကိုကန်ထရိုက်မှမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိကတိကဝတ်များ 70% နှုန်းထက်မနည်းများအတွက်စာချုပ်အလုပ်သို့မဟုတ်အလားတူအလုပ်၏ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဖေါ်ပြခြင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်တဆယ်ငါးနှစ်အတွင်းစျေးနှုန်းင်တစ်ဦးစာချုပ်အဆိုပြု,
4.3.2 ။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆက်စပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအခြေအနေ:
ဆိုက်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိသုကာနှစ်စဉ်အနည်းဆုံး 15မှာတွေ့ကြုံ
လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများစုစုပေါင်းဆိုက်ကို 1 ဒြပ်စင်5နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံးတွေ့ကြုံ
စုစုပေါင်းဆိုက်ကိုဒြပ်စင် 15နှစ်ပေါင်းသည်အနည်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိစက်မှုအင်ဂျင်နီယာ
အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့ကဒီတင်ဒါတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်အလုပ်, B / II ကိုအုပ်စုအလားတူအလုပ်လုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Communiques အတွက်အလုပ်လုပ်အလားတူအလုပ်အဖြစ်လက်ခံပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နုသို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်ဗိသုကာဌာနအတွက်ဒီပလိုမာညီမျှစဉ်းစားအလားတူအလုပ်၏ subject ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
7.1 ။ အဆိုပါတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအုပ်ချုပ်ရေးမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်နှင့် 100 ကွိုးစားပါ (တူရကီလိုင်ရာ) မှာပိုက်ဆံ TCDD xnumx.bölgဘဏ္ဍာရေးရေးရာညွှန်ကြားမှုဝယ်နိုင်ပါတယ်။
8 ။ အဆိုပါပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရုံးလိပ်စာ, တူညီတဲ့လိပ်စာမှတင်သွင်းသို့မဟုတ်မေတ္တာရပ်ခံမှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်ပြန်လာလက်ခံရရှိကနေတဆင့်လှေတျတျောမူမညျအကွောငျးအဖြစ် TCDD xnumx.bölgအိမ်ခြံမြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး Manager ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်သည်အထိလေလံ, တင်ဒါ။
9 ။ လေလံလေလံ, ဒီထုတ်ကုန်၏ယူနစ်စျေးနှုန်းများအတွက်စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုလေလံကျော်ယူနစ်စျေးနှုန်း၏ရလဒ်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်အဆိုပြုထားအလုပ်ပစ္စည်းများကိုပမာဏအားဖြင့်အသီးအသီးအလုပျကို item ။ လေလံရလဒ်များကို, ယူနစ်-စျေးနှုန်းစာချုပ်နုအပေါ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။
11 ။ တင်ဒါ (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ကာလ၏နေ့စွဲကနေလေလံ၏တရားဝင်မှုကာလ, 90 ။
12 ။ entity အားလုံးလေလံငြင်းပယ်ဖို့နဲ့နုကိုပယ်ဖျက်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
13 ။ Consortia တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
14 ။ ဤနောက်ဆုံးရက်တွင်; 2886 အမှတ်အစိုးရဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာနှင့် 4734 ဖယ်ထုတ်ပြီးတားမြစ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏စာချုပ်များအကောင်အထည်ဖော်မအက်ဥပဒေပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုရေတွက်ခြင်းနှင့် 10.08.2009 ရက်စွဲနှင့် 27315 တရားဝင်ပြန်တမ်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆက်စပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ Roleve, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Restitution စီမံကိန်း, လမ်းတိုးတက်မှု, Landscaping စီမံကိန်းများ၏ "ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ နှင့်၎င်းတို့၏လျှောက်လွှာများနှင့်အကဲဖြတ်, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်တူးဖော်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. စည်းမျဉ်း "လျှောက်ထားရမည်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
တင်ဒါအသိပေးချက် - Niğdeဘူတာရုံရှိအလုပ်သမားများ၏စစ်တန်းလျားနှင့်ရေမျှော်စင်…
တင်ဒါကြေငြာချက် - အဆောက်အအုံအမှတ် (၄) အဆောက်အအုံကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Halkalı ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနအမှတ် ၅ မြေဆီလွှာတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရုံ။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စီးပွားရေးရုံးအဆောက်အအုံများ၏ Gelemen ဘူတာပြန်လည်မွမ်းမံ
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Gölbaşıဘူတာ၊ ၆-၁၀-၁၇ အစီအစဉ်အမှတ်၊ တည်းခိုခန်း၊ တည်းခိုခန်းနှင့်အလုပ်သမား…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လွှတ်ဆင်းလမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးချုပ်မျက်မမြင်အမှတ်တရ Loading လမ်းYeşilhisarတိုးတက်မှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Osmaniye ဘူတာအမှတ် 13 Plan ကိုအဆိုပါအိမ်ရာကို Maintenance ၏ဖိုင်တွေနဲ့ပြုပြင်ရေး
သိပ္ပံကော်မတီကအစည်းအဝေး၏အမှတ်3အဆောက်အဦး Haydarpasa ရထားဘူတာ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်ကျင်းပခဲ့သည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Catanery ဘူတာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, စစ်တန်းလျားများနှင့်တည်းခိုခန်းယောဘကိုပြန်လည်မွမ်းမံအလုပ်သမားများ
တင်ဒါကြေငြာချက် - Arifiye Wagon ဝန်ဆောင်မှုကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဆောက်အ ဦး အတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro စီးပွားရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှအပူ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း - ဝန်ဆောင်မှုအိမ်များ Housevre ကို Ceylanpinar Gar Site ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
တင်ဒါခေါ်ယူမှု - Demirdağဘူတာရုံနှင့် ၀ န်ထမ်းအဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ရထားအဖွဲ့အစည်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: DIYARBAKIR DIYARBAKIR-KURTALAN LINE-KM Batman: မွေးမြူရေးအကြားအို + 000 90-000 Split
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD Fast Track သက်တမ်းတိုးနှင့်အတူစက်ဝယ်ယူ tebdili ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်သည်။